Flynas na-ekwuwa oge igbu oge na ụgbọ elu dị n'etiti KSA na Seychelles
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia » Flynas na-ekwuwa oge igbu oge na ụgbọ elu dị n'etiti KSA na Seychelles
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Flightsgbọ elu Seychelles Flynas
Ekwuputara na July 1, 2021, mmalite nke ụgbọ elu Flynas na-ejikọ agwaetiti Seychelles na alaeze Saudi Arabia abanyelarị na ụbọchị ọzọ.
Oge igbu oge metụtara ikike nke ụgbọ elu A320 Neo ọhụrụ e kenyere ebe ọ na-aga.
Flynas kwadoro na oru ngo na-aga n'ihu ugbu a maka ụgbọ elu ahụ iji nweta nkwụsị ETOPS na-esote nke a ga-amalite ọrụ ahụ.
Seychelles anabatala ndị ọbịa 300 si Saudi Arabia kemgbe Jenụwarị 2021 ma buru amụma na mmụba dị ukwuu na mpaghara ahụ ozugbo ewepụrụ Flynas ka ọ pụọ.
Ozi nke ndị nnọchi anya Flynas zigara na Seychelles Civil Aviation Authority gosiri na mbugharị nke ụgbọ elu ha si Jeddah gaa Mahé metụtara ikike nke ụgbọ elu A320 Neo ọhụrụ e kenyere ebe a na-aga, na-emetụta ụgwọ ọrụ ya na oke ya. Linegbọ elu ahụ gosikwara na ọrụ dị ugbu a maka ụgbọ elu ahụ iji nweta nnabata ETOPS na-esochi nke a ga-amalite ọrụ.
Onye Minista nke Mba Ọzọ na njem nleta na Seychelles, Maazị Sylvestre Radegonde, kwadoro nkwado nkwado nke ebe njem ụgbọ elu ọhụrụ ahụ, bụ nke kwesịrị ịrụ ọrụ ugboro atọ n'izu, n'agbanyeghị igbu oge na mmalite ụbọchị.
“Igbu oge na mbido ụgbọ elu Flynas na -aga Seychelles bụ naanị obere ndozi, nke anyị nwere ntụkwasị obi na ha ga-edozi. Ebumnuche anyị maka ahịa emetụtaghị n'ụzọ ọ bụla, anyị na-atụ anya ịhụ ka ha gafere n'àgwàetiti anyị n'oge na-adịghị anya. "
N'akụkụ ya, onye isi akwụkwọ na-abata nke Ngalaba NletaOriakụ Sherin Francis, kwuru na agbanyeghị na enwere afọ ojuju na Flynas agaghị ada na Seychelles na Julaị dị ka mbido emere, mbido a na-ele anya ịnabata ndị njem ya oge nke a ga-ekwe omume.
“Ọ bụ ihe nwute na Flynas agaghị abịa Seychelles dị ka ekwuru na July, mana nke a agaghị egbochi anyị ịga n’ihu ọrụ anyị iji mee ka Seychelles pụta na mpaghara ahụ. Anyị na-atụ anya na a ga-edozi ọnọdụ ahụ n'oge na-adịghị anya na ebe ọ ga-aga nwere ike ịnabata ndị ọbịa si Saudi Arabia na mpaghara ahụ n'oge na-adịghị anya, "Oriakụ Francis kwuru.
Edere ebe njem ahụ ihe dịka ndị ọbịa 300 si Saudi Arabia kemgbe Jenụwarị 2021 ma buru amụma dị ịrịba ama na mpaghara ahụ ozugbo Flynas malitere ife efe na Seychelles. Flynas A320 Neo ụgbọ elu nwere ikike maka ndị njem 174.